Puntland oo sheegtay inay qabatay nin ay walaalo yihiin Max?ed Siciid ?Atam? ahna ninkii kooxdaasi u qaabilsanaa miinooyinka. – Radio Daljir
Puntland oo sheegtay inay qabatay nin ay walaalo yihiin Max?ed Siciid ?Atam? ahna ninkii kooxdaasi u qaabilsanaa miinooyinka.
Garowe, Feb, 23 – Wasiirka Amniga ee dawladda Puntland Khaliif Ciise Mudan oo maanta shir jaraa?id ku qabtay xarunta madaxtooyada Puntland ee Garoowe ayaa sheegay inay qabteen nin ay walaalo yihiin Maxamed Siciid ?Atam? oo muddo dawladda Puntland kula dagaalamayey deegaanka Gal-gala ee gobolka Bari.
Ninka la qabtay oo la yiraahdo Axmed Siciid Maxmed ayaa wasiirku sheegay inuu ahaa ninkii dhinaca miinooyinka u qaalbilsanaa kooxdaasi ayna hayaan caddaymo muujiyana inuu ku lug lahaa fal dambiyeedyo badan oo ka dhacay Puntland, uuna laftiisu arrintaas qirsan yahay.
Wasiirka ayaa tibaaxay in ninkaan la qabtay ka dib markii ciidamadu dawladdu weerar gaadmo ah ku qaadeen tuulo ku taalla buuralayda Golis oo ay ku shirayeen koox ka tirsan Al-shabaab.
Dhinaca kale wasiirka ayaa sheegay inay qabteen 11 burcad-badeed ah kuwaas oo laga soo qabtay tuulo u dhaw degmada Eyl ee gobolka Nugaal, kuwaas oo hadda ku xiran magaalada Garoowe dhawaanna maxkamad la hor keeni doono.
Dawladda Puntland ayaa tiro dhawr jeer ah ku celisay in deeganada Puntland ay khatar dhinaca amniga ah ku hayaan ururka Al-shabaab iyo burcad-badeedda, ayna dawladda ka go?antahay inay la dagaallanto kooxahaasi.
Boqolaal dhallinyaro ah oo loo haysto falal arrimahaasi la xiriira ayaa ku jira xabsiyada Puntland , kuwaas oo qaarkood lagu xukumay xabsiyo wakhti dheer ah halka qaarna ay maxakamad sugayaal yihiin.